कुन मास्कको प्रयोग गर्ने? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कुन मास्कको प्रयोग गर्ने?
वीरेन्द्र बहादुर बुढा बुधबार, वैशाख २९, २०७८, ११:५१:००
मास्क देखावटी राम्रोको लागि भन्दा पनि त्यसको गुणस्तर, प्रभावकारिता हेरेर प्रयोग गरौं। मास्क भन्नेबत्तिकै हाम्रो सोचाइमा कोरोना भाइरस आउन थालेको छ। तर हाम्रो सोचाइ जस्तो भए पनि हामी मास्को प्रयोग गरिराखेका छौं। यो राम्रो कुरा हो। मास्कको धेरै प्रयोग नेपालमा कोभिडका बिरामी देखिएपछि हुन थालेको हो। यद्यपि कतिपयले अझै पनि मास्क लगाइरहेका छैनन् भने केहीले उचित तरिकाले लगाएको पाइँदैन।
मास्कको प्रयोगले हामी कोरोना भाइरसबाट मात्र सुरक्षित नभएर हजारौं किसिमका रोग गराउने किटाणु जस्तै: भाइरस, ब्याक्टेरिया, धुलो, धुँवा आदिबाट पनि सुरक्षित हुन सक्छौं।
मास्क धेरै प्रकारका भएता पनि प्राय जस्तो नेपाली बजारमा पाहिने चार किसिमका मास्क बढी प्रयोगमा आइरहेको छ।
१) एन९५ मास्क
नेपाली बजारमा पाउने मास्को दाँजोमा यो मास्क प्रभावकारी र गुणस्तर भएको मास्क हो। यसले भाइरसलाई 95 प्रतिशतसम्म रोक्दछ भने ब्याक्टेरिया, फोहर, धुलोलाई झन्डै शतप्रतिसत रोक्ने गर्दछ। त्यसैले यो मास्क राम्रो छ।
२) सर्जिकल मास्क
यो मास्कको प्रभावकारिताको कुरा गर्दा भाइरस रोक्ने सन्दर्भमा एन९५ ले जस्तै यस्ले पनि ९५ प्रतिशत नै रोक्ने गर्दछ भने अन्य व्याक्टेरिया, फोहोरलाई एन ९५ भन्दा कम रोक्ने गर्दछ। यो मास्क एन९५ भन्दा सस्तो र भाइरसको दाँजोमा एन९५ ले जस्तै रोक्ने भएकाले राम्रो छ। र यो मास्क प्रयोगको लागि उचित छ।
३) कपडाको मास्क
यसले हामीलाई माथिका २ मास्कको दाँजोमा कम सुरक्षा प्रदान गर्छ। यो मास्कलाई माथिका २ प्रकारका मास्क नभेटिएको खण्डमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ।
४) स्पोन्ज मास्क
यो मास्क देख्दा धेरै प्रभावकारी भएको जस्तो राम्रो देखियता पनि माथिका अरु भन्दा धेरै कम प्रभावकारी छ। अहिलेको समयमा हेर्दा राम्रो र सुन्दर देखिने मास्कभन्दा पनि गुणस्तरीय र प्रभावकारी मास्क नै प्रयोग गर्नुपर्छ।
-(लेखक गण्डकी सामुदायीक अस्पतालमा कार्यरत छन्।)
बाजुरामा निमोनियाका बिरामी बढे २६ मिनेट पहिले